Ahoana ny fametrahana ny beta ampahibemaso an'ny iOS 15 na iPadOS 15 | Vaovao IPhone
Jordi Gimenez | 02/07/2021 18:00 | iOS 15, Fampianarana sy torolàlana
Raha ny fitsipika dia maro aminareo no efa mahalala ny fomba fametrahana ireo kinova beta ampahibemaso navoakan'i Apple ora vitsy lasa izay, fa ho an'ireo izay tsy mahalala ny fomba fiasany na ny fomba anaovany azy amin'ny iPhone na iPad-ny, anio ny Fanavaozana ny iPhone dia handeha isika asehoy anao ny fomba anaovanao azy. Momba ny fanarahana ny dingana rehetra izany ary mahitsy mahitsy toy ny ankamaroan'ny zavatra ao amin'ny Apple.. Mazava ho azy, satria kinova beta izy ireo, dia mety misy lesoka izy ireo ary izany dia mila raisinao alohan'ny hanatanterahana ny dingana fametrahana.
Na dia marina aza fa ny kinova navoaka androany dia miasa tsara ary tsy manana olana goavana, tokony holazainay fa rehefa mivoaka ny betas ho an'ny daholobe, tokony hieritreritra ianao fa tsara kokoa ny zava-drehetra saingy tadidio foana fa mbola izy ireo betas. mazava Anjaranao irery ny fanapahan-kevitra hametraka ny beta na tsia, tsy matetika izahay no manome soso-kevitra ny fametrahana kinova amin'ny fitaovana lehibe fa any no misy ny fanapahan-kevitr'izy ireo. Andao handeha ho any amin'ny korontana ...
Ahoana ny fametrahana ny beta ho an'ny daholobe amin'ny iPhone na iPad
Voalohany indrindra ary voalohany indrindra, nanoro hevitra izy ireo ny tsy hanao kopia voafafa amin'ilay fitaovana hametrahanay ny kinova beta ampahibemaso. Raha sendra misy olana dia hanana backup foana ny kinova ofisialinay izahay amporisihina mafy ianao hanao ity backup ity ao amin'ny iCloud na na aiza na aiza no tadiavinao.
Amin'izao fotoana izao, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny fidirana amin'ny tranokala Apple avy amin'ny fitaovana izay tiantsika hametrahana ny beta izay hita ao amin'ireo kinova beta ampahibemaso. Raha vantany vao eo amin'ny tranonkala isika dia tsy maintsy manomboka ny fivoriana fotsiny na misoratra anarana amin'ny Apple ID anay, ekeo ny fepetra fampiasana ary kitiho ny beta izay te-hapetraka.
Raha vao ekena ny fepetra dia mila fotsiny isika fisoratana anarana ny fitaovan'ny iOS ary kitiho ny fampidinana ny piraofilina. Amin'izao fotoana izao dia hiseho ny varavarankely izay hilaza amintsika raha te hampidina ny piraofilina isika dia manao izany ary dia izay. Raha vantany vao alaina avy amin'ny Settings dia tsindrio fotsiny ilay mombamomba anao alaina, Mametraka. Manontany anay ny kaody izy izao, manampy azy izahay ary tsindrio ny Install indray. Amin'ity tranga ity, ny sary ambony dia ho an'ny iPhone fa ny fizotrany dia mitovy amin'ny iPad. Ny kinova beta dia azo apetraka avy Fikirana> Ankapobeny> Fanavaozana ny lozisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ahoana ny fametrahana ny beta ampahibemaso an'ny iOS 15 na iPadOS 15
Sarintany vaovao sy vaovao hafa ao amin'ny lalao Crash Bandicoot: On the Run!